सुन्तला खेती कसरी गरिन्छ ? र यसका फाईदै फाईदा (बिस्तृत जानकारी)
सम्पादन- सोम सानु
यसले हामीलाई तनाव र डिप्रेसन (उदासी रोग) बाट निकाल्न सघाउँछ । सुन्तलाको बोक्रासमेत गुणकारी मानिन्छ । सुकेका बोक्रा पिँधेर अनुहारमा लेपन गर्दा दाग, कालो पोतो हट्नुका साथै अनुहार टल्किन्छ
नेपालदृष्टि । सुन्तला जातका फलफूलहरु विश्वमै अत्यन्त महत्वपूर्ण फलफूलमा गणना हुन्छन् । सामान्यतः नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको फलको रुपमा लिइने भए पनि प्रविधिको विकासको क्रमसँगै तराईदेखि उच्चपहाडी क्षेत्रसम्म सुन्तला जातका फलफूलहरुको खेती गर्न थालिएको पाइन्छ । यसको बोट ५ देखि ८ फीटसम्म अग्लो हुन्छ। यो पतझड वर्गको वनस्पति हो। यसको बोटमा तीखो काँडा हुने गर्दछ । । पौष्टिकता तथा आय आर्जनको हिसाबले पनि यस जातका फलफूलहरुको खेती गर्नु लाभदायक देखिएको छ ।
भिटामिन ‘ए’ र क्याल्सियमले ओतप्रोत सुन्तला को नियमित सेवनले दाँत र हाडको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । सुन्तलामा भिटामिन ‘ए’, ‘बी’, फलाम र पोटेसियमसमेत बढी मात्रामा हुन्छ । यसले अस्टियोस्पोरोसिसको जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ । यति मात्र नभई, यो फलले रगतमा ब्लड सुगरको स्तरलाई सामान्य राख्छ ।
सुन्तलामा भएको पोटेसियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियमले कोलेस्ट्रोलको स्तर र उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रित राख्छन् । यी तत्त्व कोषिकाहरूमा इलेक्ट्रोलाइटलाई सन्तुलनमा राखेर मुटुलाई स्वस्थ राख्न सघाउँछन् । पोटेसियमले मस्तिष्कमा अक्सिजनको सञ्चारमा सघाउँछ ।
सुन्तला खेतीगर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु -
यसको लागि १८–३०० से। तापक्रम हुने ठाउँहरु उपयुक्त मानिन्छ तर पनि १४–४०० से। तापक्रम हुने ठाउमा पनि खेती गर्न सकिन्छ ।
वार्षिक वर्षा करीब १००० मि।मि। भएको सबभन्दा राम्रो हो तर ९००–१८०० मि।मि।सम्म वर्षा हुने स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । कम पानी पर्ने तथा पानीको वितरण राम्रो नभएका स्थानहरुमा सिंचाई ब्यवस्था राम्रो हुनु पर्दछ ।
यो मध्यम सिजन मंसीर देखि माघसम्ममा पाक्ने जात हो । फलको बनावट गोलो र हल्का पहेंलो रंगको हुन्छ तर बोक्रको सतह भने बाक्लो हुन्छ । गुलियोपन १३–१४५ र अमिलोपन ०।८–१।०० पाइन्छ । औसत तौल १००–१२५ ग्राम हुन्छ ।
यसको खेती १२००–१५०० मीटरसम्म राम्रो हुन्छ । स्थानीय जात भन्दा २–३ महिना अगाडी असौजमै पाक्ने हुँदा यसले बजार भाउ राम्रो पाउछ । यसको तौल १४०–१८० ग्राम र गुलियोपन ८–९५ र अमिलोपन ०।८–१।००५ हुने भएकोले स्थानीय नेपाली सुन्तला भन्दा कम गुलियो हुन्छ ।
यो सबै भन्दा ढीलो फाल्गुण–चैत्रमा पाक्ने हाईब्रीड जात हो । यसको खेती ८००–११०० मीटरको उचाईमा गर्न सकिन्छ । यसका बिरुवाहरु धेरै अग्ला नहुने र ज्यादा नफैलने हुँदा बिरुवाहरु बढी घनत्वमा लगाउन सकिन्छ । यो निकै उत्पादन दिने, बोक्रा पातलो भएको, गुलियोपन १४–१५ र अमिलोपन २५ सम्म भएको जापानबाट भित्र्याइएको र नेपालमा खेती विस्तार हुदै गरेको जात हो
वानस्पतिक विधिमा कुन कुन विधिहरु सुन्तला बिरुवा उत्पादन गर्नमा प्रयोग गरिन्छ र
यसको लागि करीब १ वर्ष उमेरको पेन्सिल मोटाईको ट्राईफोलियट रुटस्टकको बिरुवाको १५–२० से।मि। उचाई माथिको भाग हटाई चक्कुले टुप्पो भन्दा करीब २ से।मि। तल देखि माथिति छड्के काट्नु पर्दछ । यसैगरी उस्तै उमेरको सायनको फेदतिर पर्नेगरी २ से।मि। माथिबाट रुटस्टकमा जस्तै काट्नु पर्दछ र सायनलाई रुटस्टकमा काटिएको घाउमा जोडेर प्लाष्टिक टेपले माथिबाट हावा तथा पानी नछिर्ने गरी वलियोसंग बाध्नु पर्दछ । कलमी सफल भएपछि प्लाष्टिक हटाई दिनु पर्दछ । यस प्रकार सजिलै कलमी बिरुवा तयार हुन्छ ।
स्थानीय जातका बिरुवाहरु ६ – ६ मीटर दुरीमा लगाउनु पर्दछ तर हाईब्रीड जातका पुड्का बोट हुने खालका जातको बगैंचा लगाउदा भने ४ – ४ मीटर दुरीमा लगाउनु पर्दछ ।
साधारणतः बिरुवाहरु १–१।५ वर्ष र १।५ फीट देखि २ फीटसम्मका बिरुवा भएमा रोप्न पनि सजिलो हुन्छ र बिरुवा मर्ने प्रतिशत पनि कम हुन्छ ।
बगैंचामा लगाईएका बिरुवालाई मल्चिङ्गरछापो दिन किन जरुरी हुन्छ ?
सुन्तलाको बिरुवाबाट सकररचोर हाँगा हटाउने भनेको के हो ?
बोट बिरुवाको उमेर अनुसारको मलखादको मात्रा फरक पर्दछ र वर्ष अनुसारको मात्रा सिफारीश गरिएको हुन्छ तर यहाँ नफलेको २ वर्षको बिरुवाको लागि गोबर मल २० के।जी।, नाईट्रोजन १०० ग्राम, फस्फोरस ५० ग्राम, पोटास ७० ग्राम र फलेको १० वर्षको बिरुवालाई गोबर मल १०० के।जी।, नाईट्रोजन ५०० ग्राम, फस्फोरस २५० ग्राम र पोटास ३५० ग्रामले बिरुवाको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस बाहेक गुणस्तरीय र बढी उत्पादन लिनको लागि सूक्ष्म तत्व र हर्मोनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ ।
कीरा लागेको पात तथा फल झरेपछि जम्मा गरी जलाई दिने कीराले ग्रस्त भएका हाँगाहरु काटि हटाई दिने, कृषि सर्भो वा एत्सो ,ब्त्क्इ, जस्ता खनिज तेल १० एम।एल। प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने
औंसा लागी झरेका फलहरु औंसा माटोमा प्रवेश गर्नु अगावै फल जम्मा गरी खाडलमा पुर्नु पर्दछ । बगैंचामा झरेका फलहरु प्लाष्टिकमा पोको पारेर जलाई दिने वा तातो पानीमा डुवाएर मार्नु पर्दछ । भाले झिङ्गालाई आकर्षित गर्ने फेरोमेन ट्रयापको प्रयोग गर्न पर्दछ । रासायनिक विषादी त्यति प्रभावकारी हुदैन तैपनि माउ झिङ्गा नबसोस भन्नका लागि बेला बेलामा मेटासिष्टक्स जस्ता विषादीहरु १–२ मि।लि।रलिटर पानीमा मिसाई छर्न सकिन्छ ।
यसको नियन्त्रण गर्न यसलाई आश्रय दिने कामिनी, कडीपात तथा अन्य सुन्तला जातको बिरुवाहरु बगैंचाबाट हटाउनु पर्दछ । रासायनिक विषादि इमिडाक्लोरोपिड १ एम।एल। प्रति लिटर पानीमा वा डायमिथोयट १।५ एम।एल। प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छनु पर्दछ ।
सुन्तलामा ह्रास रोगरसिट्रस डिक्लाईन रोग भनेर नीकै चर्चा गरिन्छ वास्तवमा यो रोग कसरी लाग्दछ ?
लामो समय भण्डारण गर्न, गुणस्तरीय फल लिन र बजार भाऊ राम्रो पाउन फलहरु पूर्ण रुपमा परिपक्व भएपछि टिप्नु पर्दछ किनकी फल टिपी सकेपछि फलको गुणस्तरमा सुधार आउदैन । कम्तिमा ८५ गुलियो पदार्थ र ०।८–१।० ५ अभिलोपन पसि सकेपछि फल टिप्नु पर्दछ ।
एकनासका फलहरु एक ठाउँमा राख्दा भण्डारण गर्न, ढुवानी गर्न र बेचबिखन गर्न पनि सजिलो हुने हुदा गे्रडिङ्ग गर्नु नितान्त जरुरी हुन्छ । चोट लागेका, रोग कीरा लागेका र कलिाला फलहरु तुरुन्त हटाउनु पर्दछ । सुन्तलालाई साईजको आधारमा ए।बि। र सी गे्रडमा छुट्याउने प्रचलन छ
शीतभण्डारण लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने व्यवसायिक प्रविधि हो । यसमा फललाई ६० से। तापक्रम र ९०–९५५ सापेक्षित आद्र्रतामा ८–१० हप्तासम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
सुन्तलामा लाग्ने रोगहरुमा जरा कुहिने, फेद कुहिने, खराने, कालो ध्वाँसे, सिट्रस ग्रिनीङ्ग, क्याङ्कररखटिरे जस्ता रोगहरु लाग्दछन् । यिनीहरु मध्ये जरा कुहिने र ग्रिनिङ्ग रोगले सबै भन्दा बढी नोक्सानी गरेको हुन्छ ।
सुन्तला खेतीमा देखा परेको सुन्तलाको ग्रिनिङ्ग ९ह्रास रोग० एक प्रकारको शकाणु।व्याक्टेरियाबाट लाग्दछ र यसलाई सिट्रस सिल्लाले फैलाउने काम गर्दछ । यो रोग खासगरी रोग ग्रस्त क्षेत्रमा उत्पादीत बिरुवाबाट नयाँ स्थानहरुमा फैलन्छ ।
यस रोगको व्यवस्थापन गर्न तीनपाते र सिटे«न्ज प्रजातिका रुटस्टकमा कलमी गरेको बिरुवा मात्र लगाउने, खनजोत गर्दा जरामा चोट–पटक लाग्न नदिने, रोग ग्रस्त बोटमा तीनपाते सुन्तलाको रुटस्टक फेदमा सारी एप्रोच ग्राफ्टीङ्ग गरीदिने रोग लागेको बिरुवालाई १५ बोर्डोमिक्स्चरले जरामा पुग्ने गरी ड्रेन्च गर्ने जस्ता कार्य गरी रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
हो, निलोतथो, चुना र पानीको मिश्रणबाट तयार गरिएको बोडोमिक्स्चर, बोर्डोपेष्ट र बोर्डो पेन्ट आदि रोगनाशक विषादिहरु बेला–बेलामा प्रयोग गर्दा सुन्तलामा देखा पर्ने अधिकांश रोगहरुबाट बिरुवालाई बचाउन सकिन्छ । श्रोत - नेपालपत्र
अव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिटर पास बन्द
विराटनगरमा मतगणना धमाधम सुरु
सन्सारको पहिलो धर्म(सृष्टि)को अवतार हुन सत्य साई(भिडियो सहित छोटो परिचय)
गणेशमान सिंहको १०७औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
पढेका र विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले यसरी पाउछन ऋण
फेरी चन्द समूहका तीन पक्राउ
८ दिनको बाढी पहिरोबाट४५ जनाको मृत्यु
सुन तस्करका संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्ने –मन्त्री लालबाबु पण्डित